‘देशी गर्ल’ को कायाकल्प - मनोरञ्जन - नेपाल
बलिउडमा सलमान खानसँग फिल्म खेल्न मरिहत्ते नगर्ने हिरोइन को होला ! सलमानसँग जोडिँदा आफ्नो करिअर चम्कने लालसा हुन्छ हिरोइनमा । धेरैको हकमा त्यस्तै भएको छ । तर, एक हिरोइनले सलमानको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भारतमा अनुबन्ध भएर पनि अन्तिम समयमा हात झिकेकी छन् । उनी अरू कोही नभएर प्रियंका चोपडा हुन् । जो पछिल्लो समय बलिउड होइन, हलिउडमा मस्त छिन् । भारतबाट बाईबाई गर्नुमा प्रियंकाको भनाइ थियो, प्रेमी निक जोनससँग इन्गेजमेन्ट गर्न व्यक्तिगत समय चाहिएकाले । सोही कारण निर्देशक अलि अब्बास जाफर रिसाएनन्, बरु प्रियंका–निकलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिए । तर, यही बेला खबर आएको छ, उनी काउब्वाई निन्जा भाइकिङ नामक अंग्रेजी फिल्ममा अनुबन्ध भएकी छन् । जुन फिल्ममा गार्जियन अफ द ग्यालेक्सीका स्टार क्रिस प्राटका साथ देखिनेछिन् ।
अनि, बलिउडमा चर्चा चल्ने भइहाल्यो, कतै काउब्वाई निन्जा भाइकिङ खेल्न भारत छाडेकी त होइनन् ? प्रियंकाको स्वबहिर्गमनमा सलमानको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
पछिल्लो दुई वर्षयता हिन्दी फिल्ममा देखिएकी छैनन् प्रियंका । एबीसी टेलिभिजनको सिरिज क्वान्टीको खेलेपछि हलिउडमा उनको चर्चा सुरु भएको थियो । केही प्रतिष्ठित टिभी अवार्ड पनि जितिन् । ओस्कार अवार्ड समारोहमा उपस्थित भइन् । बेवाचले उनको यात्रालाई अझ सहज बनायो । त्यसैले त सलमानको फिल्म छाड्ने हिम्मत गरिन् । द हलिउड रिर्पोटरका अनुसार काउब्वाई निन्जा भाइकिङलाई मिसेल म्याकलरेनले निर्देशन गर्नेछिन् । म्याकलरेन उनै हुन्, जसले यसअघि गेम अफ थ्रोन्स बनाएर ख्याति कमाएकी थिइन् । शंकै छैन, यो फिल्म प्रियंकाका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो हलिउड प्रोजेक्ट हुनेछ ।
त्यसो त, प्रियंकाका हातमा कुनै हलिउड फिल्म नभएका होइनन् । दुई फिल्म रिलिजका क्रममा छन्, अ किड् लाइक जेक र इजन्ट इट् रोमान्टिक ? बिग बजेटका दुवै फिल्म प्रियंकाकै वरपर घुमेका छन् । त्यसैले त भन्न थालिएको छ, अब प्रियंका ‘देशी गर्ल’ मा सीमित रहिनन्, ‘हलिउड गर्ल’ बनेकी छन् । दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या रायलगायतका बलिउड अभिनेत्रीले पनि हलिउडमा पाइला नराखेका होइनन् । फरक यत्ति हो, प्रियंका सबभन्दा अगाडि छिन्, आजका दिनसम्म ।